Kanton'ny fahiny :: Hisy ny fanamby lehibe eo amin’ ny tontolon’ny famokarana mpihira gasy • AoRaha
Kanton’ny fahiny Hisy ny fanamby lehibe eo amin’ ny tontolon’ny famokarana mpihira gasy
Kolontsaina malagasy anisan’ny marefo kokoa raha oharina amin’ny zavakanto hafa ny hiragasy. Antony maro ny mahatonga izany. Tsy nataon’ny mpikarakara sy ny mpitia ary ny mpihiragasy hahakivy anefa izany fa nentin’izy ireo hanatratra vina lehibe…
Hatramin’izay, hira iray isan-taona ihany no tafavoakan’ny tarika mpanao hiragasy iray. Iny no entina manao fitetezam-paritra sy enti-mifanandrina amin’ny adin-kira gasy samihafa. « Tafiditra ao anatin’ny vinavinanay amin’ity taona 2019 ity ny hamoaka vokatra iray isam-bolana na isan-telo volana », hoy i Dadafara, mpitantana ny LT Production, mpamokatra sy mpikirakira ireo tarika mpihiragasy.
« Mba hampivoatra kokoa ny fahafantaran’ny olona sy ny fitiavan’izy ireo ny hiragasy no antony hametrahana an’izao fanamby izao», araka ny fanazavany ihany. Nomarihin’i Dadafara fa tena hiantefan’ity vina ity ny zana-kira. « Aza hadinoina fa anisan’ny ankafizin’ny Malagasy fatratra tokoa ny zana-kira rehefa reny na hitany any amin’ny haino aman-jery. Efa fandraisana anjara goavana amin’ny fitaizana sy fanabeazana ho olom-banona ny fandrenesana ny zana-kira”, hoy ihany izy.
Mamaritra ny fiandohan’ny taom-pilalaovana ny vanim-potoanan’ny maintany, fiandohan’ny ririnina, ho an’ireo tarika mpihira gasy. Tsy hita an-tanàna ary tsy mipetrapetraka mihitsy ny ankamaroan’izy ireo. Misy ny mahavita adin-kiragasy maro mandra-pahatonga ny fahavaratra. Mahatratra zato mahery eo na mihoatra ny fiakarana an-tsehatra atrehan’ny tarika iray.
Ny fianakaviana mikarakara famadihan-drazana sy ny fikambanana na rafitra samihafa manatontosa foara sy kermesy no tena misafidy ny adin-kiragasy. Raha ny nambaran’i Dadafara, mbola mitazona ny lohalaharana amin’ireo fety aman-danonana ary fotoan-dehibe ireo ny famadihana sy ny kermesy.
Miankina amin’ny halaviran’ny toerana hanaovana ilay adin-kira gasy kosa ny karaman’ny tropy. Ito farany ihany mantsy no miantoka ny fitaterana azy ireo, amin’ny ankapo­beny. Manodidina ny 600 000 ariary hatramin’ny 1 200 000 ariary ny karaman’ny tarika mpihira gasy amina hetsika iray.
Mitaky zava-baovao hatrany ireo mpankafy hiragasy, na ny eto an-drenivohitra na ny any ambanivohitra. Vaindohandraharaha izany, na amin’ny tonon-kira na amin’ny seho ivelany (fitafy…). “Tsy maintsy mamoron-kira vaovao fa tsy mety raha ny teo aloha ihany no haverina”, araka ny tenin’i Dadafara.
Nisy fotoana no nampalaza ny ady amin’ny piraty. Somary nangingina izany, tato ho ato, hany ka manao izay danin’
ny kibony indray ireo mpanao hosoka sy mpitavana ny talentan’ny mpanakanto. Anisan’ireo velon-taraina ny mpanao hiragasy sy ny mpamokatra. Andrasana ny fandraisana andraikitry ny minisitra vaovao.
“Manomboka ny volana airily sy mey eo ny taom-pilalaovana ho an’ny mpihiragasy ary efa ao anatin’ny asa tanteraka sahady izy ireo, amin’izao fotoana izao. Tokony hanatevina ny vola miditra amin’izy ireo ny famoahana rakitsary na DVD, saingy mipetraka ho olana goavana ny fanjakazakan’ny mpanao hosoka, amin’ny endriny maro”, araka ny nambaran’i Dadafara, mpikarakara ireo tarika mpihiragasy.
Fantatra fa mbola betsaka ny olona manjifa ireny rakikira sy rakitsary hiragasy ireny. Mamaly hatrany ny filan’izy ireo ny mpandraharaha amin’ity sehatra ity. Vao mivoaka iray andro monja anefa izy ireny, dia miparitaka sahady ny piraty, ka mamono antoka ny mpamokatra. “Ankoatra ny piraty, mampitaraina ny mpanakanto sy izahay mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny hiragasy ihany koa ny afitsok’ireo mpampi­ditra hira amin’ny alalan’ireo teknôlôjia vaovao, na amin’ny finday na amin’ny solosaina”, hoy hatrany i Dadafara.
Ny lanjan’ny “K7”
Fitaovana iray enti-mitahiry sy mampaharitra ny hiragasy ny K7. Raha mitondra fandrosoana ny fivoaran’ny teknôlôjia ho an’ny sehatra sasany, toa ahiana hahafaty ny hiragasy, izay zavakanto anisan’ny mampiavaka antsika kosa izany. “Mbola misy foana ny famokarana rakikira amin’ny K7 ho an’ny hiragasy. Midika izany fa misy hatrany ny mpanjifa, indrindra ny any ambani­vohitra, na eo aza ny finday sy vata fandefasam-peo hafa samy efa malaza any”, hoy i Dadafara.
Nampian’ity farany fa anisan’ny anton’io toe-javatra io ny fahazoana antoka ny tsy hahasimba ilay rakikira ao
anatin’ny K7. Mety ho very tanteraka ireny hira amin’ny teknôlôjia vaovao ireny. Nohamafisin’ity mpandraharaha amin’ny tontolon’ny hiragasy ity hatrany fa manimba ny famokarana rakikira sady mahakivy ireo mpihiragasy izany.
Tsara ny manamarika fa eny an-tsehatra, any am-pandehanana any, no atao ny fandraisam-peo. Rehefa tapitra
tanteraka kosa ny fitetezana famadihana sy kermesy vao atao ny famokarana ilay rakikira. Tarika anisan’ny karakarain’i Dadafara, ohatra, ry Rainitelo (Andohavary), Ramilison Besigara zanany (Fenoarivo), Rafaralahy Raymond (Ambatoantrano)…
Baolina kitra- CHAN :: Hifandona amin’i Mozambika i Madagasikara
Fifamoivoizana eto an-drenivhitra :: Mihisatra toy ny dian-tsokatra ny fanamaivanana ny fitohanan’ny fiara